विश्वका सुन्दर हिमालको सूचीमा सातौं नम्बरमा माछापुच्छ्रे , कुमारी रहन दिने कि नदिने ? « OSBreak
विश्वका सुन्दर हिमालको सूचीमा सातौं नम्बरमा माछापुच्छ्रे , कुमारी रहन दिने कि नदिने ?
चिप्लेढुङ्गा- सुन्दर नगरी पोखरा । नौ तालले सिङ्गारिएको पोखरा उपत्यकाको एउटा आकर्षण हो फेवाताल । यस तालमा माछापुच्छे« हिमालको अद्भूत दृश्य देख्न पाइन्छ । यस प्राकृतिक छटाको रसस्वादन गर्न देशभित्र र विदेशबाट थुप्रै पर्यटक पोखरा आउँछन् । प्रकृतिप्रेमीहरुले यस दृश्यको वर्णन गर्दै ‘फेवातालको आँगनमा लै लै माछापुच्छ्र«े छाया’ जस्ता गीत रचेका छन् । कुमारी हिमालको नामबाट समेत परिचित यो हिमाल विश्वका सुन्दर हिमालको सूचीमा सातौं नम्बरमा पर्छ । पछिल्लो समय यस हिमालको आरोहण खोलिनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयले बहस निम्त्याएको छ । छ हजार ९९३ मिटरको उचाइबाट पोखरामा आउनेहरुलाई स्वागत गरे झै आभाष दिलाउने यस हिमाललाई पर्यटनविद् झलक थापा ‘कुमारी’ विशेषण जोड्न रुचाउनुहुन्छ । पोखराको सुन्दरताको वर्णन गरेर नथाक्ने उहाँ यतिबेला दुःखी हुनुहुन्छ । विसं २०२७ मा पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पोखरा आउनुहँुदा फेवातालको किनारबाट उहाँको नजर ठोक्कियो एक्लै मुस्कुराइरहेको माछापुच्छ्र«े हिमालसँग । त्यसपछिका दिनहरुमा उहाँ पोखराको सुन्दरतामा रमाउनुभयो र त्यसलाई सदा आँखा र हृदयमा राखिराख्न पोखरावासी बन्नुभयो ।
माछापुच्छ्रे«लाई ‘यशोधरा’ ठान्नुहुन्छ उहाँ । पचास वर्ष अघिदेखि माछापुच्छ्र«ेलाई मनमा सजाएर राख्दै आउनुभएका उहाँलाई यो हिमाल आरोहणका लागि खोलिँदैछ भन्ने समाचारले व्याकुल बनाइदिएको छ । विश्वका सुन्दर हिमालमा नेपालको आमादब्लम र माछापुच्छ्रे पर्छ । आमादब्लममा आरोहण हुन्छ । माछापुच्छ्र«ेलाई कुमारी राखेरै यसको सौन्दर्यबाट पर्यटकलाई भित्र्याउनु पर्ने विचार राख्नुहुने उहाँको प्रश्न छ – माछापुच्छ्रेलाई कुमारी नै राखे के बिग्रन्छ ? आजसम्म हिमाल आरोहणबाट कति कमायौं र अब माछापुच्छ्र«ेबाट पनि कमाउने आशा राखेका छौ ?” पर्यटन व्यवसायी नरेश भट्टराई पनि माछापुच्छ्र«ेको सुन्दरतालाई जोगाउन आरोहण गर्न दिन नहुने तर्क राख्नुहुन्छ ।
माछापुच्छ्र«े गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले पर्यटन विभागसँग सहकार्य गरी माछापुच्छ्र«े हिमालको आरोहण खोल्न पहल भएको बताउनुभयो । “प्राकृतिक कुरालाई जीविकोपार्जनसँग जोड्नु पर्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ – “माछापुच्छ«्रेका बासिन्दा हिमालको उपयोग गरेर आफ्नो जीवनस्तर बढाउन लाग्नुपर्छ । अब हेरेर बस्ने कुराको मात्रै तर्र्क गरेर हुँदैन ।” जाति र धर्म विशेषसँग जोडेर यस हिमालको आरोहण रोकिएको भन्ने कुरा मिथ्या भएको उहाँ ठान्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो – “हिमाल पहाड प्राकृतिक कुरा हुन् । यसलाई जातजातिले पूजा गर्छन् भन्ने प्रसङ्ग जोडेर बन्द गरिएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन ।”
सन् १९५६ तिर बिट्रिश कर्णेल रोबर्टसन र उनको टोलीले माछापुच्छ्र«े आरोहणको प्रयास गरेका थिए । नसकेर बीचबाटै फर्के । आफूले नसकेपछि अरुलाई किन यश कमाउन दिने भन्ने मनसायले देउता छन् भन्ने प्रचार गरेको हुनसक्ने गुरुङको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार विसं २०२० पछि यसको आरोहण बन्द छ । कोही आरोही अग्लो हिमाल चढ्न रुचाउँछन्, अर्काथरी सुन्दर हिमाल । नेपालका सगरमाथा र आमादब्लम सुन्दर हिमालमा गनिन्छन् । आरोहीको सङ्ख्याले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गर्ने उहाँको तर्क छ । सन् १९५० को दशकमा अन्नपूर्णको प्रथम आरोहण भएको थियो । हाल त्यहाँ आरोहण गर्नेको सङ्ख्या घटिरहेको बताइन्छ । मानिस अग्लो र सुन्दर हिमाल चढ्न मन पराउँछन् । माछापुच्छे«्रमा उचाइ र सुन्दरता दुबै विशेषता भएकाले आरोहीको रोजाइ पर्ने तर्क गुरुङ्गको छ ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले माछापुच्छ्रे« आरोहण अनुमति अध्ययनको विषय रहेको बताउनुभयो । नेपालमा झण्डै तीन हजार हिमाल रहेका छन् । संसारमा ८ हजारभन्दा माथिका १४ वटा हिमाल छन्, त्यसमध्ये नेपालमा मात्रै ८ वटा छन् । माछापुच्छ्रे« हिमाल आरोहणका विषयमा उहाँले भन्नुभयो “माछापुच्छ्र«े हिमाल आरोहण के कारणले रोकिएको थियो ? आरोहण खुला गर्दा हुने फाइदा र खुला नगर्दा हुने फाइदाका बारेमा अध्ययन गरेर मात्रै सान्दर्भिक निर्णय गरिनेछ । हिमाल आरोहीको तथ्याङ्गलाई पनि हामी केलाउँछौं ।” नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष सन्तवीर लामा भन्नुहुन्छ – पर्यटन विकासमा नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजी जरुरी हुने भएकाले माछापुच्छ«्रे आरोहण खुला गरे आरोहीको आगमन बढ्ने सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । विसं २०३४ सालदेखि हिमाल आरोहणको रोयल्टी उठाउने अनुमति प्राप्त गरेको सङ्घले हाल २७ वटा हिमालको आरोहण अनुमति प्राप्त गरेको छ । सरकारले ४१४ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरेको छ ।
उहाँले माछापुच्छ्र«े हिमाल चढेर त्यसको सुन्दरता नबिग्रने भएकाले खुला गर्नुपर्ने धारणासँग आफू सहमत रहेको बताउनुभयो । नेपालमा सन् १९५३ मा तेन्जिङ्ग नोर्गे शेर्पाले सगरमाथा आरोहण गरेका थिए । उनले त्यस बेला दार्जिलिङबाट हिमाल चढ्ने अनुमति लिएका थिए । बेलायतीहरु हाबी रहेको त्यो समयमा उनीहरुकै बोली बिक्ने गरेको लामा बताउनुहुन्छ । सन् १९५६ मा नेपालमा हिमालयन सोसाइटी भन्ने संस्थाको गठन भयो र यही बेलादेखि यस संस्थाको सिफारिशमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हिमाल आरोहणको अनुमति प्रदान गर्ने गरेको लामा स्मरण गर्नुहुन्छ । कन्जरभेसन इन्स्टिच्युटका अनुसार विश्वका सुन्दर हिमालमा स्विट्जरल्यान्डको दि मटेरहोर्न, अमेरिकाको डेनाली, आइसल्याण्डको किर्कजुफिल, दक्षिण अफ्रिकाको टेबल माउन्टेन, नेपालको आमादब्लम, स्विट्जरल्यान्डको माउन्ट इगर छन् र सातौं नम्बरमा माछापुच्छ्रे« रहेको छ ।